ဆက်တက်ပါ ..... 09.05.2016 နေ့စဉ်ခွန်အား
ဖတ်ရန်: ၁သက် ၄း၁-၁၂ | သမ္မာကျမ်းစာတစ်နှစ်စာ: □ ၄ရာ ၇-၉ □ ယော ၁း၁-၂၈
နေ့တိုင်းအစဉ် အချင်းချင်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် တိုက်တွန်း နှိုးဆော်ကြလော့။ (ဟေဗြဲ ၃း၁၃)
ရစ်ချက် ကို ပင့်တင်ပေးရန် လိုသည်။ ရစ်ချက်သည် သူငယ်ချင်း ကီဗင် နှင့်အတူ ကျောက်တောင်တက်ရာ ကီဗင်က ကြိုးများကို သေချာစွာကိုင်တွယ်ချည်တုတ်ပေးသူ ဖြစ်သည်။ မောပန်းပြီး ဆက်မသွားနိုင်တော့သဖြင့် ရစ်ချက် က ကီဗင် အား မြေပေါ်သို့ ကြိုးလျောချပေးရန် ပြောလိုက်သည်။ သို့သော် ကီဗင် က အတော်ခရီးပေါက်နေပြီ ဖြစ်၍ အားမလျော့ဘဲ ဆက်သွားရန် သူ့ကို အားပေးသည်။ သို့နှင့် လေထဲတွင် တွဲလောင်းကျနေသော ရစ်ချက် က ကြိုးစား၍ ဆက်တက်ခဲ့ပြီး၊ တောင်ပေါ်ရောက်သည်အထိ အံ့သြစရာ အောင်မြင်အောင် တက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ သူငယ်ချင်း ကီဗင်၏အားပေးစကားကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကနဦးအသင်းတော်၌ သခင်ယေရှု၏ နောက်တော်လိုက်များသည် သခင်ဘုရား၏နောက်တော် ဆက်လိုက်ရန်နှင့် ကြင်နာမှုကရုဏာပြရန် အချင်းချင်းကိုခွန်အားပေးတိုက်တွန်းသည်။
မကောင်းမှုဒုစရိုက်နှင့်ပြည့်သော ခေတ်ယဉ်ကျေးမှုတွင် သန့်ရှင်းစွာ နေထိုင်ရန် အားတက်သရော အချင်းချင်းကို တောင်းပန်တိုက်တွန်းကြသည် (ရောမ ၁၂း၁ ၊ ၁သက် ၄း၁)။ ထိုသို့ပြုရန် ဘုရားကလည်း ၎င်းတို့ကို တို့ထိသောကြောင့် ယုံကြည်သူများသည် နေ့စဉ် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် တိုက်တွန်းခွန်အားပေးရမည် (တ ၁၃း၁၅)။ ခရစ်တော်၏ခန္ဓာတစ်ခုတည်း ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကြားဝင်ရောက်၍ ဖြန်ဖြေရန် (ရော ၁၅း၃၀)၊ အသင်းတော်နှင့်လူများ အဆက်အသွယ် မပြတ်ရှိနေရန် (ဟေဗြဲ ၁၀း၂၅)၊ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်ပို၍ ချစ်လာရန် (၁သက် ၄း၁၀) တိုက်တွန်းအားပေးရမည်။
သူ၏အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ဆက်သွယ်ပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားရှင်၏မစမှုဖြင့် ယုံကြည်သူချင်းအား ကိုးစားနာခံခြင်းတောင်ကို အောင်မြင်စွာ တက်နိုင်အောင် မစအားပေးရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်နှင့်အခွင့်ထူးပင် ဖြစ်တော့ သည်။ MARVIN WILLIAMS
သခင်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ရန် တစ်စုံတစ်ယောက်အား သင်ဘယ်အချိန်က
နောက်ဆုံးအကြိမ် ခွန်အားပေးခဲ့သနည်း။ သန့်ရှင်းစွာ အသက်ရှင်ရန်၊ ဆက်ဆုတောင်းရန်၊ ယေရှုနှင့် အခြားသူများအပေါ် သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို တိုးချဲ့ဖြန့်ရန် မည့်သူ သင့်ကိုလှုံ့ဆော်အားပေးခဲ့ပါသနည်း။
facebook.com/ourdailybread တွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဝေမျှပါ။
သင်တို့သည် ယခုပင်ပြုသည်နည်းတူ အချင်းချင်း တိုက်တွန်း၍ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တည်ဆောက်ကြလော့။ ၁သက် ၅း၁၁
Richard neededapush, and he got one. He was rock climbing with his friend Kevin who was the belayer (the one who secures the rope). Exhausted and ready to quit, Richard asked Kevin to lower him to the ground. But Kevin urged him on, saying he had come too far to quit. Dangling in midair, Richard decided to keep trying. Amazingly, he was able to reconnect with the rock and complete the climb because of his friend’s encouragement.
In the early church, followers of Jesus encouraged one another to continue to follow their Lord and to show compassion. Inaculture riddled with immorality, they passionately appealed to one another to live pure lives (Rom. 12:1; 1 Thess. 4:1). Believers encouraged one another daily, as God prompted them to do so (Acts 13:15). They urged each other to intercede for the body (Rom. 15:30), to help people stay connected to the church (Heb. 10:25), and to love more and more (1 Thess. 4:10).
Through His death and resurrection, Jesus has connected us to one another. Therefore, we have the responsibility and privilege with God’s enablement to encourage fellow believers to finish the climb of trusting and obeying Him.
When was the last time you needed to urge someone to keep following Jesus? Who has encouraged you or stirred you to pursue holiness, to keep praying, or to enlarge your love for Jesus and others?
Share with us at Facebook.com/ourdailybread
မကောင်းမှုဒုစရိုက်နှင့်ပြည့်သော ခေတ်ယဉ်ကျေးမှုတွင် သန့်ရှင်းစွာ နေထိုင်ရန် အားတက်သရော အချင်းချင်းကို တောင်းပန်တိုက်တွန်းကြသည် (ရောမ ၁၂း၁ ၊ ၁သက် ၄း၁)။ ထိုသို့ပြုရန် ဘုရားကလည်း ၎င်းတို့ကို တို့ထိသောကြောင့် ယုံကြည်သူများသည် နေ့စဉ် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် တိုက်တွန်းခွန်အားပေးရမည် (တ ၁၃း၁၅)။